I-FX News Feed-Funda ukurhweba | Iindaba zeFX
I-FX News Feed-Funda ukurhweba
NgoLwesihlanu, Meyi 20, 2022
I-Lucky Block Price Forecast: I-LBLOCK / i-USD iNyuka ukuya eNyangeni
Lucky Block Price Forecast - Meyi 20 Uqikelelo lwexabiso leBhloko leThamsanqa lomelele ngokugqithisileyo njengoko ligqobhoza kwindawo enkulu yokuchasa nge-$0.002100. [I-LBLOCK / i-USD Ixesha elide I-Trend: I-Bullish (i-30-Minute Chart) Amanqanaba aPhambili: Iindawo zokubonelela: i-$ 0.002500, i-$ 0.002100, i-$ 0.001800 IiNdawo zeMfuno: $ 0.001220, i-$ 0.000910, i-$ 0.000780, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX, i-$ XNUMX. ]
Uqikelelo lweXabiso leNgqekembe ye-DeFI: Ukwahluka kweBullish kwi-DEFC ukuSeta abaThengi kwiMotion
Uqikelelo lwexabiso le-DeFI Coin: NgoMeyi 20 Uqikelelo lwexabiso lexabiso le-DeFI Coin liyi-bullish eguquguqukayo kwinqanaba lemfuno ye-$ 0.2320. Ukwahlukana kwe-bullish kubonisa ukuqala kwenguqu ekuhanjisweni kweemarike. I-DEFCUSD iTrend yeXesha elide: I-Bullish (itshati ye-30-Minute) Amanqanaba aPhambili: Iindawo zoNikezo: $ 0.5650, $ 0.4730IiNdawo zeMfuneko: $ 0.3730, $ 0.2320DEFCUSD ukuguquguquka kweengqekembe kuncitshiswe kakhulu, kubonisa [...]
Ixabiso le-USD / CNH Ixabiso le-Glides Kufuphi ne-6.7400, njengoko iNzala yenzalo igcinwe kwi-3.70 Ipesenti yiBhanki yaBantu baseChina (PBOC)
Isenzo sexabiso le-USD / CNH lalisekufuphi nenqanaba lexabiso le-6.7400, njengoko i-PBOC yahlala inzala yayo kwi-3.7 ipesenti. Isenzo sexabiso lesibini sisebenza ngakumbi, kwaye oku kungenxa yokuba i-Dollar Index okwangoku ingaphezulu kwe-103.00. Kungekudala, i-Index ye-dollar ifakwe kwi-102.66, leyo: ibe nefuthe elibalulekileyo kwi-USD. Unyaka […]
Abathengisi be-USDJPY bazimisele ukubuyisela ixabiso kwiNqanaba le-126.900
Uhlalutyo lwe-USDJPY - NgoMeyi 19 abathengisi be-USDJPY bazimisele ukubuyisela ixabiso kwindawo engundoqo ye-126.900 njengesiphumo sokufuduka kwe-bullish kwibini. Ithuba lokuthengisa lifuna ukulungisa ixabiso le-USDJPY nangona likwi-saga ye-bullish. Ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne-126.900, abathengi bebeqinisekisa ixabiso […]
NgoLwesine, Meyi 19, 2022
Uqikelelo lwexabiso le-Defi Coin: I-DEFC iMiselwe ukuQhuba iBullish kwiNqanaba langoku leMbango
Uqikelelo lwexabiso le-DeFI Coin: NgoMeyi 19 Ixabiso lexabiso le-DeFI Coin libikezela ukuqhubeka kwentshukumo ye-bullish ngoncedo lwendawo yenkxaso engaphantsi kokulingana. I-DEFCUSD Ixesha elide I-Trend: I-Bullish (i-chart yeyure ye-1) Amanqanaba aPhambili: Iindawo zokubonelela: i-$ 0.5650, i-$ 0.4730IiNdawo zeMfuneko: $ 0.3730, i-$ 0.2320DEFCUSD ifikelele kwindawo yokuxhasa ebalulekileyo malunga ne-$ 0.2320. Indawo yemfuno okwangoku ingezantsi […]
I-Euro itephu eNtsha kwiVeki ephezulu njengexabiso leMarike yeMali enokwenzeka kwi-ECB yokunyuka kweRayithi
I-euro irekhode i-rally ebukhali ngoLwesine njengoko ixabiso labatyali-mali linokwenzeka kwimbono yomgaqo-nkqubo onobundlobongela yi-European Central Bank (ECB) kwixesha elisondeleyo, phakathi kokubuyisela kwidola emva kweenzuzo ezibalulekileyo kwiiseshoni zangaphambili. Iingxelo zibonisa ukuba iimarike zemali zinamaxabiso kwindawo enokubakho ye-106 yesiseko (bps) […]
I-Lucky Block Price Forecast: I-LBLOCK / i-USD iqhubela phambili i-Bullish Trend kunye ne-New Highs
I-Lucky Block Price Forecast: Meyi 19 Uqikelelo lwexabiso leBhloko leThamsanqa lelokuba imakethi iqhubeke nokunyuka kwayo ngoncedo lomgca wendlela ye-bullish. LBLOCK/USD Ixesha elide Trend: Bullish (30-Minute Itshathi) Amanqanaba aPhambili: Supply Zones: $0.001470, $0.0013500, $0.0011700, $0.0011100 Demand Zones: $0.0008730, $0.0009230D yimpumelelo $0.0010700LOCK0.0012200LB ikhefu $XNUMX $ yimpumelelo, ikhefu $XNUMXLBXNUMX, i-XNUMXLBXNUMX ikhefuXNUMX. I […]
I-USDCAD iTruthukela Phezulu ukusuka kwipateni yoNxantathu
Uhlalutyo lwe-USDCAD - Meyi 18 USDCAD ihambela phezulu njengoko ixabiso lifuna ukuphuma kwipatheni yalo engunxantathu. Inkqubo yonxantathu yayikhuphiswe ngokulinganayo, kodwa iinkunzi zazihlala zinecala. Nangona kunjalo, iibhere zazisa isibetho sokuqala ngokutyhala ixabiso ukuya kwicala elisezantsi likanxantathu. Noko ke, iinkunzi zenkomo zasebenzisa […]
Ulindelo lweMarike yeNgqekembe ye-DeFI: I-DEFC imiselwe ukuBuyiswa kweBullish
Ukulindela i-DeFI Coin Market - ngoMeyi 18 Ukulindela imakethe ye-DeFI Coin kukuguqulwa kweemarike kwinqanaba elithengisiweyo kwi-0.3130 yeedola. I-DEFCUSD Ixesha elide I-Trend: I-Bullish (i-chart yeyure ye-1) Amanqanaba aPhambili: IiNdawo zoNikezo: i-$ 0.3530, i-$ 0.3420IiNdawo zeMfuneko: $ 0.3320, i-$ 0.3130DEFCUSD iqalise ukuhanjiswa kwecala lokuthenga xa imarike yathengiswa kakhulu ngomhla we-14 kaMatshi. Indawo yemfuno kwi […]
Uqikelelo lwexabiso leNhlanhla leBhlokhi: I-LBLOCK/USD yenza uKuqhambuka okuBalulekileyo kokuNyuka kwePhatheni yeWedge
Lucky Block Price Forecast: May 18 Uqikelelo lwexabiso Block Lucky is bullish njengoko imarike spiked kwinqanaba lokumelana kwi $0.001240. I-LBLOCK/USD Ixesha elide I-Trend: I-Bullish (i-30-Minute Chart) Amanqanaba aPhambili oNikezelo lweNqanaba: $0.001240, $0.001160, $0.001100, $0.001000 IiNdawo zeMfuno: $0.000790, $0.000870, $0.0009170, $0.001160 $0.001240 i-$ XNUMXD inqanaba lokuxhathisa i-$XNUMX i-$XNUMX ye-$ XNUMX. Intshukumo yentengiso engxamisekileyo ukuya […]
Ukuba unamava kuwo onke kwiimarike zemali, ngoko uyazi ukuba kukho ubuninzi beenkonzo zeendaba ze-forex ezikhoyo kwi-intanethi. Abaninzi banikezela ngohlaziyo oluncomekayo kunye nezihloko ezichukumisayo, ngelixa ezinye zisekwe kubhaliso. Ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho zomntu ngamnye, uninzi lwezi khetho zinokuba yindlela enokusebenziseka. Ewe, ayizizo zonke iinkonzo ezenziwe zilingana. Ukutya kweendaba ezi-2 zoRhwebo yindawo eyodwa yazo zonke izinto ezijongene nemali, iiCFD, ikamva, kunye ne-cryptocurrencies. Nokuba uthengisa i-oyile ekrwada okanye i-Euro, izinto ezibalulekileyo ezenzekayo zosuku ziya kuqwalaselwa ngokucokisekileyo, ngexesha elifanelekileyo. Eyona nto ingcono, le nkonzo yeendaba zeFX i-100% yasimahla. Ukukwazi ukufunda phakathi kwemigca yinxalenye enkulu yokuba ngumrhwebi ophumelelayo. Ngaphandle komxholo ofanelekileyo, impembelelo yemarike enokubakho yento yeendaba ephumayo okanye isiganeko esicwangcisiweyo sezoqoqosho sinokubonakala siyimfihlakalo. Ukuqonda isiganeko, apho iimarike ziya kuchaphazeleka, kunye nendlela yokufumana inzuzo kwisenzo zizakhono ezithathwe kwiminyaka yamava. Kulapho iqela le-Learning 2 Trade lingena khona ― banolwazi lwendlela yokuqonda ukuba zeziphi iindaba ezingabahambisi bentengiso, kwaye ziyingxolo nje.
Ukunyuka kwendawo yokuthengisa yedijithali kuye kwenza urhwebo olusebenzayo lusondele kwiiyure ze-24 ngosuku, iintsuku ezi-5 ngeveki ishishini. Njengoko intetho yakudala isitsho, "imali ayilali." Xa kuziwa kurhwebo olusebenzayo lwangoku, amagama ayinyani kunzima ukuwafumana. Nokuba ungumrhwebi eAsia, kuMbindi Mpuma, eYurophu, okanye eUnited States, umdlalo uvuliwe kwaye ithuba liyaqhubeka. Ifuthe elinokuba nalo ibali leendaba ezibalulekileyo kwiimarike likhulu. Ngelishwa, iindaba ze-forex aziphelelanga kwiiyure zethu zokuvuka. Ngaba bekungayi kuba kuhle ukwazi ukuba kuza kwenzeka ntoni ngelixa ukude nesikrini sorhwebo kunye nokuba izikhundla zakho ezivulekileyo ziya kuchaphazeleka njani? Ungajongi ngaphaya kwe-Funda i-2 Trade news feed. Ngabahlalutyi abagubungela i-Asia-Pacific, iYurophu, kunye neeseshoni zokurhweba zase-US, awusoze uphume-i-loop xa kuziwa kwiindaba zeFX. Ukusuka eNew York ukuya eLondon ukuya eTokyo, abahlalutyi bethu bakwiwashi, beqhekeza iimarike ngexesha langempela. Ukuba iwotshi yakho ye-alam ayicimanga kwaye ufike emva kwexesha emarikeni, akukho maxhala-uphononongo olukhawulezileyo lweendaba ezi-2 zoRhwebo luya kukubuyisela kukhuphiswano olukhokelayo kungekudala.
Ukuhlaziywa kokugqibela: Matshi 24th, 2022